गोर्खाहरूको पक्षमा मोदीले बोले चार कुरा : एनआरसीले गोर्खाहरूलाई क्षति हुनेछैन : नरेन्द्र मोदी - खबरम्यागजिन
Homeखबरदार्जीलिङगोर्खाहरूको पक्षमा मोदीले बोले चार कुरा : एनआरसीले गोर्खाहरूलाई क्षति हुनेछैन : नरेन्द्र मोदी
April 3, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि दार्जीलिङ Comments Off on गोर्खाहरूको पक्षमा मोदीले बोले चार कुरा : एनआरसीले गोर्खाहरूलाई क्षति हुनेछैन : नरेन्द्र मोदी
‘एनआरसीबारे गलत अफवाह फैलाइँदैछ। म सबै गोर्खाहरूलाई यो मञ्चबाट आश्वास्त गराउन चाहन्छु, तपाईँहरू कसैले पनि यसको कारणले क्षति बेहोर्नु पर्नेछैन। म बचन दिन्छु,’ मोदीले भने, ‘टिएमसीको पेरोलमा घुम्नेहरू यत्रतन्त्र छन्। जो टिएमसीको पेरोलमा घुम्दैछन्, उनीहरूले आतङ्क फैलाउँदैछन्। डर देखाउँदैछन्। म उनीहरूलाई चेतावनी दिन्छु, उनीहरूको दिन सकियो। भाजपाको सरकार आउने वित्तिकै निर्दोष नागरिकलाई सताउनेहरूले हिसाब देखाउनुपर्नेछ। कानूनलाई जवाब दिनुपर्नेछ।’
सिलगढीको कावाखालीमा आयोजित जनसभाबाट देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चारवटा कुरा गोर्खाहरूको पक्षमा बोलेका छन्। उनले भने, ‘दार्जीलिङ वा जलपाइगढीका संसाधनप्रति यो चौकीदार पूरै संवेदनशील छ।’ दुवै जिल्लाका संसाधन नष्ट गर्ने शक्ति विरुद्ध भाजपाको सरकारले कार्वाहीपूर्ण नीति ल्याउने उनको आशय थियो।
अर्कोतिर जनजातिको मुद्दाबारे पनि मोदीले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए। उनले भने,
‘मलाई दार्जीलिङ र जलपाइगढीका समस्याबारे सबै जानकारी छ। तर दिदीले केही गर्नै दिइरहेका छैन। मैले गर्न खोजेको विकासमा ममता दिदी स्पीड ब्रेकर लगाइरहेकी छन्। यद्धपि, यो चियावाला यहाँको चियाबगानको हितमा काम गर्न समर्पित छ। जनजातिको मागबारे भाजपाले गम्भीरतासित विचार गरिरहेको छ।’
यता पहाडमा एनआरसीलाई लिएर तृणमूल खेमा र विनय तामाङ खेमाले निक्कै टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नरेन्द्र मोदीले ‘टिएमसीको पेरोलमा काम गर्ने कर्मचारी’-को संज्ञा दिँदै खुलेरै जवाब दिएका छन्। एनआरसीबारे अफवाह फैलाउनेहरूलाई उनले खबरदारी पनि गरे। टिएमसीको पेरोलमा मस्ती गरिरहेकाहरूले जुन अफवाह फैलाउँदैछ, उनीहरूसित भाजपाको सरकार बनेपछि जवाब मागिने मोदीको खबरदारी थियो।
उनले राजु विष्टको पक्षमा पनि खुलेरै बोले।
‘म राजु विष्टलाई दुई दशकदेखि चिन्छु, उनी तपाईँकै सन्तान हुन्। तपाईँको समस्याबारे राजुलाई सबै कुरा थाहा छ,’ उनले भने, ‘तपाईँहरू कुनै डरबिना भोट दिनुहोस्, तपाईँहरूको हौसला बङ्गालको भाग्य परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ। दिदीको स्पीड ब्रेकर तोड्नु नै तपाईँको भाग्य बनिनु हो।’
उनले यसपल्टको चुनाउलाई दुइ स्पष्ट धाराबीचको लडाईँ बताए। एउटा धारा हो चौकीदारको र अर्को धारा हो- दागदारहरूको।
‘यति विशाल भीड मैले नदेखेको भए म थाहा पाउँदिन थिएँ, कि दिदीको नाउ डुबिसकेको छ। तपाईँहरू यस्तो परम्पराको बाहक हुनुहुन्छ, जसले देशको लागि सर्वस्व त्याग गरेको छ,’ मोदीले भने, ‘धेरै वीर सपुत, गोर्खाहरूले यो देशलाई सिञ्जित गरेका छन्। देशलाई नयाँ दिशा दिनमा तपाईँहरूको महत भूमिका रहेको छ।’
उनले पाँच वर्षमा देशलाई भाजपाले विकास दिन पाएको तर बङ्गालमा भने नपाएको पनि खुलाए। ‘अरू राज्यमा जुन गतिमा काम भयो, बङ्गालमा भएन। बङ्गालमा गर्न पाइनँ, किन भने बङ्गालमा स्पीड ब्रेकर छ, त्यसलाई दिदीको नामले जानिन्छ,’ उनले भने, ‘दिदी विकासको स्पीड ब्रेकर हुन्। उनलाई गरिबको चिन्ता छैन। दिदी गरिबलाई लिएर राजनीति गर्छिन्। गरिबी सकियो भयो भने त दिदीको राजनीति नै सकिन्छ। यसकारण दिदीले गरिबी बचाइराखेकी हुन्।’
उनले कङ्ग्रेस होस् र कम्युनिष्ट, उनीहरू सबै गरिबलाई गरिब राख्न राजनीति गरिरहेको उनले जनाए। ‘म गरिबी हटाउने राजनीति गर्छु,’ उनले भने, ‘उनीहरू गरिबलाई गरिब नै राख्न राजनीति गर्छन्।’
उनले पश्चिम बङ्गालमा चिट फण्डमार्फत ममता व्यानर्जीले गरिबको पैसा लुटेको आरोप पनि लगाए। ‘गरिबको पैसा लिएर दिदीका मन्त्री, विधायक, साथी सबै भागे। जुन गरिबले आफ्नो महनतले कमाएको पैसा हो। धेरै विश्वाससित पैसा चिटफण्डलाई सम्पिएको हो, तर त्यसलाई दिदीले लुटिन्,’ उनले भने।
एनडिए सरकारले गरिबको लागि आयुष्मान भारत योजना शुरु गरेको र
विमारीलाई5लाखसम्मको चिकित्सा नि:शुल्क हुने भए पनि यो योजनालाई बङ्गालमा र दिदीले ब्रेक लगाइदिएको गुनासो पनि उनले गरे।
‘70 लाखभन्दा धेर किसान परिवारको काममा पनि दिदीले ब्रेक लगायो। पीएम किसान सम्मानअनुसार किसानको खातामe सोझै पैसा पस्दैछ। यसलाई पनि बङ्गालमा ब्रेक लगाइदियो,’ उनले भने, ‘तर यी सबैको जवाब आज दिदीसम्म पुगिसक्यो।’
उनले आजको उपस्थित भीड नै ममताको निम्ति खतराको घन्टी रहेको पनि बताए।
भाजपाले गरिब र मध्यमवर्गलाई लुट्नबाट बँचाउन रेरा कानून बनाए पनि दिदीले लागू गर्नै नदिएको अनि दिदी देशको विकासको पक्षमा नरहेको पनि खुलाए।
‘बालाकोटमा आतङ्कीहरूलाई हाम्रा जवानहरूले घरैमा पसेर मारे। चोट पाकिस्तानलाई परेको छ, पीडा दिदीलाई किन? बालाकोटमा पसेर जवान फक्रिँदा किन दिदी रोएकी हुन्?,’ मोदीले दिदीलाई छड्के हाने, ‘रावलपिन्डी, इस्लामावाद, लाहौरलाई जति चोट लाग्यो, त्योभन्दा ठूलो चोट दिदीलाई किन? सीमामा दार्जीलिङ, बङ्गालका जवानहरू तैनाथ छन्, तर ममतालाई सेनाप्रति विश्वास नै छैन। कानूनमा विश्वास नै छैन। बीरजवानलाई खतरामा पार्नेहरूलाई सफल हुन दिनुहुँदैन। मोदीले एकैजना धुसपैठलाई सहजै छोड्दैन। कङ्ग्रेसको ऐतिहासिक भूलको कारण शरणार्थी बन्न परेकाहरूलाई न्याय पनि यही चौकीदारले दिनेछ।
लु NRC को भुत देखाएर जनतालाई तर्साउदै TMC को Payroll मा कुद्नेहरूलाइ सञ्चो भयो कि अब त।।#Breaking :Now it is clear.. NRC doesn't affect true Gorkha residing at Darjeeling and adjoining areas. We urge people not to believe in fake people and fake rumours.#BimalGurungZindabaad
Gepostet von गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा केंद्रीय समिति am Mittwoch, 3. April 2019